တစ်နေရာတည်းမှာပဲ ပိတ်နေပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် မွန်းကြပ်လာတယ်လို့ ခံစားရရင် – Trend.com.mm
ဘဝမှာ စိတ်အားလျော့တဲ့ ဖီလင်မျိုးတော့ လူတိုင်းဖြစ်ဖူးမှာပါ … လုပ်ငန်းခွင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် အခြေအနေတွေက အမျိုးမျိုးကြုံနိုင်တာမို့ စိတ်ဓာတ်အတက်ကျဖြစ်တဲ့ ချိန်တွေရှိနိုင်ပါတယ်။
သင်ဟာ တစ်နေရာတည်းမှာပဲ ပိတ်မိနေပြီလို့ ခံစားနေရရင် ဒီ(၂)ချက် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်…
– အကြောင်းရာတစ်ခုကို ထပ်တလဲလဲ တွေးမိနေတယ်။
– အက်ကြောင်းထပ်နေတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေနဲ့ ချွတ်မရတဲ့ အကျင့်တွေ သင့်မှာစွဲကပ်နေလို့ပါ။
ဒါတွေကို သင်မပြင်နိုင်ရင် ဘဝတစ်ခုလုံးကို အကြီးကျယ်ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ပျော်ရွှင်မှုကို
လိုချင်တယ်.. ဘဝမှာ အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိ ပြည့်ပြည့်ဝဝနေထိုင်သွားချင်တယ်ဆိုရင် သတ်မှတ်ထားတဲ့
ပန်းတိုင်တစ်ခုရှိရမယ်။ ဒီပန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့ ဖောက်ရမယ့်လမ်းတွေ စတင်ပြင်ဆင်ရတော့
ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြန်မေးပါ… ငါတစ်နေရာမှာပဲ ရပ်တန့်နေပြီး တစ်သက်လုံး ဒီလိုပဲနေသွားတော့မှာ
လား… အများနည်းတူ စွန့်စားခန်းတွေ ဖွင့်ပြီး လူပီပီသသမနေထိုင်ချင်ဘူးလားလို့ ။
(၁) မနက်ပိုင်း အစီစဉ်ကို စနစ်တကျ ဆောက်ရွက်တတ်ပါစေ
မနက်ပိုင်းလုပ်ဆောင်မှုတွေကို စနစ်တကျ စီမံတတ်တာက အောင်မြင်တဲ့လူတိုင်းမှာ အများဆုံး
တွေ့ရတတ်တဲ့ အကျင့်တစ်ခုပါပဲ။ ဒီအကျင့်က သင့်ဘဝတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်။ မနက်တိုင်း အလုပ်ကို အလောတကြီးနဲ့ သွား ၊ မနက်စာ မမှီ ၊ ဗိုက်ဟောင်းလောင်းနဲ့ အလုပ်လုပ်နေရတယ်ဆို သင့်ရဲ့မနက်ပိုင်း အစီစဉ်ကို စီမံခန့်ခွဲတာ ပုံစံမကျသေးလို့ပါ။ အချိန်ယူတဲ့နေရာမှာ လွဲမှားနေတယ်။ ဘယ်နေရာမှာ ငါ့အချိန်တွေကို ဖြုန်းမိလိုက်လဲ? လို့ သေချာစဉ်းစားပါ။ မနက်ခင်းတစ်ခုသာယာနေမှ အဲ့ဒီတစ်နေ့တာဟာ လူတစ်ယောက်ကို စိတ်လန်းဆန်းစေမှာမဟုတ်လား….
အချိန် ၅/ ၁ဝမိနစ်လောက်ယူပြီး စာအုပ်တစ်အုပ်ထဲမှာ ဖြစ်ချင်တဲ့ Goal တစ်ခုကို ချရေးပါ။ ပန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့ ဒီနေ့ ၊ ဒီအချိန်ကစပြီး ကြိုးစားနေပြီဆိုတာကို မှတ်သားထားပေါ့။ ပိုပြီး စိတ်တက်ကြွအောင် မြူးကြွတဲ့ပုံလေးတွေ တွဲကပ်ပြီး စာလေးတွေရေးထားပါ။ ကာလာစိုတဲ့ ဘောပင်လေးတွေ သုံးပါ။ အကြံဥာဏ်သစ်တွေ၊ နေ့တစ်နေ့ရဲ့အစီစဉ်တွေနဲ့ ရှုပ်ထွေးတဲ့ ပြဿနာတွေအတွက် အကူညီဖြစ်စေမှာပါ။
သင်ယူမှုတွေကို ဘယ်တော့မှ မရပ်တန့်လိုက်ပါနဲ့။ လောကမှာ ကိုယ်မသိတာတွေအများကြီးပါ။ သင့်ကိုသတ်မှတ်ပေးလိုက်တဲ့ ပညာအရည်ချင်းဘွဲ့လက်မှတ်တွေ ပိုင်ဆိုင်ပြီးသွားလို့ သင်ယူစရာတွေ ကုန်ဆုံးသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အများကြီးရှိနေပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် မလုပ်ဖူးတဲ့ အသစ်အဆန်းတွေကို မြည်းစမ်းကြည့်ပါ။ငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီး အကျိုးမရှိတဲ့ အတွေးတွေ ၊ အရာမထင်နိုင်တဲ့ ကိစ္စတွေလုပ်နေမယ့်အစား ၊ စာဖတ် ၊ ဘာသာစကားအသစ် သင်ယူ ၊ ကိုယ်ဝါဿနာပါရာ သင်တန်းလေးတွေတက်ပါ။ သင့်မှာသာ ပြည့်ဝတဲ့ အရည်ချင်းရှိရင် ဘယ်သူမှ နှိမ်ချပြီး မဆက်ဆံရဲပါဘူး။
လူတစ်ယောက်အတွက် ပေါင်းသင်းတဲ့ သူငယ်ချင်း ၊ အသိုင်း​ဝိုင်း ပတ်ဝန်းကျင်တွေဟာ သိပ်ပြီး
အရေးပါပါတယ်။ သင်နဲ့အတူ အချိန်အတော်များကို အတူကုန်ဆုံးလေ့ရှိတဲ့သူဟာ အကောင်းမမြင်တတ်၊ အရာရာကို အဆိုးဘက်ကပဲ ကြည့်နေတယ်ဆိုရင် တစ်ချိန်ချိန်မှာ သင့်အတွက်လည်း အကျိုးယုတ်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုက ၈​ဝရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတာဆိုတော့ သင့်ကို အားယုတ်လျော့စေမယ့်လူမျိုးတွေဆို အမြန်ဆုံးလမ်းခွဲပါ။ ဒီခေတ်ကြီးမှာ အားနာနေရင် ကိုယ်ပဲ ခံရမှာပါ။ Comfort Zone ကနေ ထွက်ရမှာကိုမကြောက်ပါနဲ့ ။ လူသစ်တွေနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံရမှာကို မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ ယုံကြည်ကြည်မှု ရှိရှိ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာကို ဆက်လုပ်ပါ။
မတူညီတဲ့ အရာတစ်ခုကို စမ်းသပ်ကြည့်ခြင်း
တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့်မှာကိန်းအောင်းနေတတ်တဲ့ talent တွေ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ အခွင့်မကြုံသာလို့ ဒါတွေကို ထုတ်သုံးခွင့်မရတဲ့အခါ အခွင့်ရေးကို ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးပါ။ အကျင့်တစ်ခုကို ထပ်ခါထပ်ခါလုပ်နေမိတော့ ဘယ်အရာတွေမှာကော ကိုယ်ကထူးချွန်နိုင်သလဲဆိုတာ သေချာမဆန်းစစ်နိုင်တာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ သေချာတာက သင့်အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်တစ်ခု လိုအပ်နေပါတယ်။ အတွေ့အကြုံအသစ်တွေ ဖန်တီးပါ။
မနက်ဖြန်သေရင် ဒီနေ့ ငါဘာတွေလုပ်နေမှာလဲဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် တွန်းအားပေးပါ။ ဘာအတွက် တွေဝေနေမှာလဲ.. ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ဘဝတစ်ခုရဖို့ အခုကစပြီး အကောင်ထည်ဖော်လိုက်ပါ။ အချိန်သည် လူကိုမစောင့်ပါဘူး။
Comfort Zone ကနေ ရုတ်တရက် ထွက်လိုက်တဲ့အခါ သင့်အတွက် အဆင်မပြေတာတွေ၊ အသားမကျသေးတာတွေ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ရပါတယ်..စိတ်မပူပါနဲ့။ အခု ပြောသွားတဲ့ အချက်တွေတိုင်း ပြောင်းလဲသွားနိုင်မယ်ဆိုရင် အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိဘဝမှာ နေထိုင်နိုင်ပြီး အောင်မြင်မှုကိုလည်း တစ်ချိန်မှာ ပိုင်ဆိုင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဘဝမှာ စိတျအားလြော့တဲ့ ဖီလငျမြိုးတော့ လူတိုငျးဖွဈဖူးမှာပါ … လုပျငနျးခှငျမှာပဲဖွဈဖွဈ ၊ အိမျမှာပဲဖွဈဖွဈ အခွအေနတှေကေ အမြိုးမြိုးကွုံနိုငျတာမို့ စိတျဓာတျအတကျကဖြွဈတဲ့ ခြိနျတှရှေိနိုငျပါတယျ။
သငျဟာ တဈနရောတညျးမှာပဲ ပိတျမိနပွေီလို့ ခံစားနရေရငျ ဒီ(၂)ခကျြ ဖွဈပါလိမျ့မယျ…
– အကွောငျးရာတဈခုကို ထပျတလဲလဲ တှေးမိနတေယျ။
– အကျကွောငျးထပျနတေဲ့ အတှေးအချေါတှနေဲ့ ခြှတျမရတဲ့ အကငျြ့တှေ သငျ့မှာစှဲကပျနလေို့ပါ။
ဒါတှကေို သငျမပွငျနိုငျရငျ ဘဝတဈခုလုံးကို အကွီးကယျြထိခိုကျစနေိုငျပါတယျ။ ပြျောရှငျမှုကို
လိုခငျြတယျ.. ဘဝမှာ အဓိပ်ပာယျရှိရှိ ပွညျ့ပွညျ့ဝဝနထေိုငျသှားခငျြတယျဆိုရငျ သတျမှတျထားတဲ့
ပနျးတိုငျတဈခုရှိရမယျ။ ဒီပနျးတိုငျကိုရောကျဖို့ ဖောကျရမယျ့လမျးတှေ စတငျပွငျဆငျရတော့
ကိုယျ့ကိုကိုယျပွနျမေးပါ… ငါတဈနရောမှာပဲ ရပျတနျ့နပွေီး တဈသကျလုံး ဒီလိုပဲနသှေားတော့မှာ
လား… အမြားနညျးတူ စှနျ့စားခနျးတှေ ဖှငျ့ပွီး လူပီပီသသမနထေိုငျခငျြဘူးလားလို့ ။
(၁) မနကျပိုငျး အစီစဉျကို စနဈတကြ ဆောကျရှကျတတျပါစေ
မနကျပိုငျးလုပျဆောငျမှုတှကေို စနဈတကြ စီမံတတျတာက အောငျမွငျတဲ့လူတိုငျးမှာ အမြားဆုံး
တှရေ့တတျတဲ့ အကငျြ့တဈခုပါပဲ။ ဒီအကငျြ့က သငျ့ဘဝတဈခုလုံးကိုပွောငျးလဲသှားနိုငျတယျ။ မနကျတိုငျး အလုပျကို အလောတကွီးနဲ့ သှား ၊ မနကျစာ မမှီ ၊ ဗိုကျဟောငျးလောငျးနဲ့ အလုပျလုပျနရေတယျဆို သငျ့ရဲ့မနကျပိုငျး အစီစဉျကို စီမံခနျ့ခှဲတာ ပုံစံမကသြေးလို့ပါ။ အခြိနျယူတဲ့နရောမှာ လှဲမှားနတေယျ။ ဘယျနရောမှာ ငါ့အခြိနျတှကေို ဖွုနျးမိလိုကျလဲ? လို့ သခြောစဉျးစားပါ။ မနကျခငျးတဈခုသာယာနမှေ အဲ့ဒီတဈနတေ့ာဟာ လူတဈယောကျကို စိတျလနျးဆနျးစမှောမဟုတျလား….
အခြိနျ ၅/ ၁ဝမိနဈလောကျယူပွီး စာအုပျတဈအုပျထဲမှာ ဖွဈခငျြတဲ့ Goal တဈခုကို ခရြေးပါ။ ပနျးတိုငျကိုရောကျဖို့ ဒီနေ့ ၊ ဒီအခြိနျကစပွီး ကွိုးစားနပွေီဆိုတာကို မှတျသားထားပေါ့။ ပိုပွီး စိတျတကျကွှအောငျ မွူးကွှတဲ့ပုံလေးတှေ တှဲကပျပွီး စာလေးတှရေေးထားပါ။ ကာလာစိုတဲ့ ဘောပငျလေးတှေ သုံးပါ။ အကွံဉာဏျသဈတှေ၊ နတေ့ဈနရေဲ့အစီစဉျတှနေဲ့ ရှုပျထှေးတဲ့ ပွဿနာတှအေတှကျ အကူညီဖွဈစမှောပါ။
သငျယူမှုတှကေို ဘယျတော့မှ မရပျတနျ့လိုကျပါနဲ့။ လောကမှာ ကိုယျမသိတာတှအေမြားကွီးပါ။ သငျ့ကိုသတျမှတျပေးလိုကျတဲ့ ပညာအရညျခငျြးဘှဲ့လကျမှတျတှေ ပိုငျဆိုငျပွီးသှားလို့ သငျယူစရာတှေ ကုနျဆုံးသှားမှာမဟုတျပါဘူး။ အမြားကွီးရှိနပေါသေးတယျ။ ဒါကွောငျ့ မလုပျဖူးတဲ့ အသဈအဆနျးတှကေို မွညျးစမျးကွညျ့ပါ။ငုတျတုတျထိုငျပွီး အကြိုးမရှိတဲ့ အတှေးတှေ ၊ အရာမထငျနိုငျတဲ့ ကိစ်စတှလေုပျနမေယျ့အစား ၊ စာဖတျ ၊ ဘာသာစကားအသဈ သငျယူ ၊ ကိုယျဝါဿနာပါရာ သငျတနျးလေးတှတေကျပါ။ သငျ့မှာသာ ပွညျ့ဝတဲ့ အရညျခငျြးရှိရငျ ဘယျသူမှ နှိမျခပြွီး မဆကျဆံရဲပါဘူး။
လူတဈယောကျအတှကျ ပေါငျးသငျးတဲ့ သူငယျခငျြး ၊ အသိုငျး​ဝိုငျး ပတျဝနျးကငျြတှဟော သိပျပွီး
အရေးပါပါတယျ။ သငျနဲ့အတူ အခြိနျအတျောမြားကို အတူကုနျဆုံးလရှေိ့တဲ့သူဟာ အကောငျးမမွငျတတျ၊ အရာရာကို အဆိုးဘကျကပဲ ကွညျ့နတေယျဆိုရငျ တဈခြိနျခြိနျမှာ သငျ့အတှကျလညျး အကြိုးယုတျမှုတှဖွေဈလာနိုငျပါတယျ။ ပတျဝနျးကငျြရဲ့လှမျးမိုးမှုက ၈​ဝရာခိုငျနှုနျးလောကျရှိတာဆိုတော့ သငျ့ကို အားယုတျလြော့စမေယျ့လူမြိုးတှဆေို အမွနျဆုံးလမျးခှဲပါ။ ဒီခတျေကွီးမှာ အားနာနရေငျ ကိုယျပဲ ခံရမှာပါ။ Comfort Zone ကနေ ထှကျရမှာကိုမကွောကျပါနဲ့ ။ လူသဈတှနေဲ့ ထိတှဆေ့ကျဆံရမှာကို မစိုးရိမျပါနဲ့။ ယုံကွညျကွညျမှု ရှိရှိ ကိုယျဖွဈခငျြတာကို ဆကျလုပျပါ။
မတူညီတဲ့ အရာတဈခုကို စမျးသပျကွညျ့ခွငျး
တဈခါတဈလေ ကိုယျ့မှာကိနျးအောငျးနတေတျတဲ့ talent တှေ ရှိနတေတျပါတယျ။ အခှငျ့မကွုံသာလို့ ဒါတှကေို ထုတျသုံးခှငျ့မရတဲ့အခါ အခှငျ့ရေးကို ကိုယျတိုငျဖနျတီးပါ။ အကငျြ့တဈခုကို ထပျခါထပျခါလုပျနမေိတော့ ဘယျအရာတှမှောကော ကိုယျကထူးခြှနျနိုငျသလဲဆိုတာ သခြောမဆနျးစဈနိုငျတာမြိုး ဖွဈတတျပါတယျ။ သခြောတာက သငျ့အတှကျ ပတျဝနျးကငျြအသဈတဈခု လိုအပျနပေါတယျ။ အတှအေ့ကွုံအသဈတှေ ဖနျတီးပါ။
မနကျဖွနျသရေငျ ဒီနေ့ ငါဘာတှလေုပျနမှောလဲဆိုတဲ့ စိတျနဲ့ ကိုယျ့ကိုကိုယျ တှနျးအားပေးပါ။ ဘာအတှကျ တှဝေနေမှောလဲ.. ကိုယျလိုခငျြတဲ့ ဘဝတဈခုရဖို့ အခုကစပွီး အကောငျထညျဖျောလိုကျပါ။ အခြိနျသညျ လူကိုမစောငျ့ပါဘူး။
Comfort Zone ကနေ ရုတျတရကျ ထှကျလိုကျတဲ့အခါ သငျ့အတှကျ အဆငျမပွတောတှေ၊ အသားမကသြေးတာတှေ ရှိလာနိုငျပါတယျ။ ရပါတယျ..စိတျမပူပါနဲ့။ အခု ပွောသှားတဲ့ အခကျြတှတေိုငျး ပွောငျးလဲသှားနိုငျမယျဆိုရငျ အဓိပ်ပာယျရှိရှိဘဝမှာ နထေိုငျနိုငျပွီး အောငျမွငျမှုကိုလညျး တဈခြိနျမှာ ပိုငျဆိုငျနိုငျလိမျ့မယျလို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ။